စက်ရုံရှားစောင်းပင် - တစ်ဦးကညစ်ညမ်းမြေရပြီ!
သင်ဒီမှာပါ: Home / ကြီးထွားလာ Solutions / အဘယ်အရာကိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန် / အခြားသူများက / ရှားစောင်းပင် / စက်ရုံရှားစောင်းပင် - တစ်ဦးကညစ်ညမ်းမြေရပြီ!
15 / 04 / 2015 By ရော်ဂျာ Pilon 25 မှတ်ချက်
ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့စန်း Joaquin ကိုချိုင့်၌ပွညျသူပွညျသားတစ်ဦးကကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမြေဆီလွှာတွင်အဏ္ဏဝါအနည်, ယှေလကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့သိုက်ဆယ်လီနီယမ်၏နှင့်အခြားသတ္တုဓာတ်ရှိပါတယ်။ ချိုင့်၌စိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုရေသွင်းစိုက်ပျိုးသောအခါ, ပယ်အနီးအနားမှာရေလမ်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းမြောင်းထဲကနေငါသောက်သောဆည်မြောင်းငါးမှအဆိပ်အတောက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆယ်လီနီယမ်မြင့်မားသယ်ဆောင်နိုင်သောရေ, ရွှေ့ပြောင်းသောငှက်များနှင့်အခြားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကနေ run ကိုလည်းမရှိ။
ဆယ်လီနီယမ်နဲ့ Boron ၏မြေဆီလွှာကို "clean" ကိုရှားစောင်းပင်သုံးပြီးကြောင်းဖြေရှင်းချက်ဆက်ဆက်ကမ္ဘာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်!
အချို့မြေဆီလွှာများလွန်း "ငန်" များမှာ
အဆိုပါ: ရှားစောင်းပင်၏ဤသည်အလွန်တိကျတဲ့အမျိုးအစားကြီးထွား မိတ်ကိုသစ်တော်ရှားစောင်းပင် or Opuntia ficus-indica
source အပိုဒ် - မိတ်ကိုသစ်တော်ရှားစောင်းပင်ကယ်လီဖိုးနီးယားမြေဆီလွှာကိုစင်ကြယ်စေနိုငျ
အခွားသောအပိုဒ် - တစ်ဦး Bioremediation Tool ကိုအဖြစ်ရှားစောင်းပင်အသုံးပြုခြင်း
ကြံ့ဖွံ့ဘလော့ - ရှားစောင်းပင်ထိုပိုးမွှားလျော့ကျစေအကြောင်းနို့ဆီအပိုဒ်
Filed under: ရှားစောင်းပင်, ပိုးမွှားလျော့ကျစေ Solutions, ကြီးထွားလာ Solutions, အခြားသူများက, အဘယ်အရာကိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန် အတူ Tagged: အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု